यी हुन सलमान खानका टप फाइभ दुश्मन, कसैसँग छैन बोलिचाली - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन सलमान खानका टप फाइभ दुश्मन, कसैसँग छैन बोलिचाली
मुम्बई । सलमान खानको क्रेज भारत र अन्य देशमा निकै छ । स्वभावले सोझो जस्तो लाग्छन उनी ।
तर उनको जीवनमा केही यस्ता व्यक्ति छन जोसँग उनको निकै कडा दुश्मनी छ ।
सलमान खानका बारेमा भनिन्छ– उनी परिवार साथीहरुको खुशीका लागि जे पनि गर्न सक्छन । तर कोहीसँग बिग्रियो भने उनको शत्रुता झनै खतरनाक हुन्छ रे ।
यस्तोमा सलमान खानसँग सम्बन्ध बिग्रेका केही कलाकार छन । आउनुस को को रहेछन त ?
१. बिबेक ओबराय
यो लिष्टमा सबैभन्दा पहिला बिबेक ओबरायको नाम आउँछ । यिनलाई सलमानको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन मानिन्छ । यी दुईका बीच अभिनेत्री ऐश्वर्या रायलाई लिएर शत्रुता भएको थियो । सलमानको ऐश्वर्यासँग ब्रेकअप भएपछि विवेकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सलमानमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म दुबैको बोलचाल बन्द छ ।
याे पनि पढ्नुस पैसाकै कारण बिहे हुन सकेन : सलमान खान
२. सञ्जय लिला भन्साली ः
चलचित्र निर्माता हुन सञ्जयलिला भन्साली । सलमान खानले भन्सालीसँग खामोशी, हम दिल दे चुके सनम जस्ता कैयन हिट फिल्म पनि गरे । तर चलचित्र हम दिल दे चुके सनम निर्माणका बेला यी दुई बीच केही कुरामा सम्बन्ध बिग्रिएको बताइन्छ । अहिले यी दुबै कुराकानी गर्दैनन । त्यसो त केहीले भने सलमानले छिटै भन्सालीसँग काम गर्न गइरहेको दावी पनि नगरेका होइनन ।
३. अर्जुन कपुरः
सलमान खान कुनै बेला अर्जुन कपुरका मेन्टर थिए । तर मलाइका अरोडाका कारण उनको सम्बन्ध अर्जुनसँग बिग्रियो । सलमान खानले उनका भाई अरबाज खानकी भुतपूर्व श्रीमती मलाइका र अर्जुन कपुरबीचको सम्बन्ध स्वीकार गरेका छैनन ।
४. कोरियोग्राफर सरोज खान ः
चर्चित कोरियोग्राफर सरोज खानसँग पनि सलमानको झगडा भएको छ । चलचित्र अन्दाज अपना अपनाको एउटा गीतमा सरोज खान कोरियोग्राफी गरिरहेकी थिइन । सलमानलाई सरोजले डान्सका राम्रा स्टेप नदिएको लागेपछि उनी रिसाएका थिए । त्यसपछि दुबैमा ठूलो झगडा भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस बलिउडका कुन कलकारले कति पाश्रिमिक लिन्छ ?
५. अरिजित सिंहः
गायक अरिजित सिंहसँग पनि सलमानको सम्बन्ध राम्रो छैन । एउटा पुरस्कार समारोहमा सलमानले अरिजितलाई के तपाई सुत्नु भएको थियो र ? भन्दै प्रन गरेपछि अरिजितले तपाईहरुले मलाई सुताई दिनुभयो भन्दै रुखो जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि सलमानले चलचित्र सुल्तानबाट अरिजितको गीत नै हटाए । अरिजितले सलमान खानसँग माफी मागेपनि सलमानले भने माफ गरेका छेनन ।